Maxaa kasoo baxay kulankii Madaxweynaha Galmudug & James Swan? - Awdinle Online
Maxaa kasoo baxay kulankii Madaxweynaha Galmudug & James Swan?
Magaalada dhuusamareeb ee Caasimadda Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa waxaa Maanta gaaray Ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Amb, James Swan, isaga oo kulan la yeeshay Madaxweynaha Galmudug & kuxigeenkiisa.
Amb, James Swan oo safarka ay ku wehlinayeen masuuliyiin ka socda Hay’adaha UNDP iyo WFP ee Qaramada Midoobay, waxaana Madaxda Galmudug ay kala hadleen taageerada Qaramada Midoobay ay siineyso Galmudug sanadkan 2021, taas oo isugu jirta mid Siyaasadeed iyo mid horumarineed.
Isagoo maanta warfidiyeenka kula hadlayey magaalada Dhuusamareeb, Ergayga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, James Swan, waxa uu hoosta ka xarriiqay taageerada Qaramada Midoobay ee Galmudug, isagoo soo dhaweeyey kaalinta Madaxweyne Qoorqoor ee xallinta khilaafka ka jira doorashada dalka, waxa uu ku celiyey wakiilku baahida loo qabo wadahadal iyo is-afgarad si horay loogu sii socdo.
Previous articleItoobiya oo Qunsul u soo magacaabatay Puntland
Next articleCiidamada Dowladda & kuwa Galmudug oo degaan dagaal kula wareegay